QM”Waxaan u bahanahay 100 Bilyen sanadkii si loo ilaaliyo Cimilada Dunida” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA QM”Waxaan u bahanahay 100 Bilyen sanadkii si loo ilaaliyo Cimilada Dunida”
QM”Waxaan u bahanahay 100 Bilyen sanadkii si loo ilaaliyo Cimilada Dunida”
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in ilaalinta cimilada ay u baahan tahay $ 100 bilyan sannadkii. Isagoo ku adkeynaya in wadashaqeynta wadajirka ah ee u dhaxeysa dhammaan qeybaha ay khuseyso arrintaasi ay gacan ka geystaan wejiga isbeddelka cimilada iyo kululaynta caalamiga ah iyo in la helo faa’iidooyin badan oo wax ku ool u noqonaya bulshooyinka adduunka ah.
Baaqan Antonio Guterres ayaa ku soo beegmay furitaanka shirwaynaha cimilada ee caasimadda Austria ee Vienna sannadkii saddexaad oo isku xigta lagu qabanayo, waxaana ka soo qaybgalay dhowr shakhsiyaad caan ah.
Xoghaya Guud ee Qaraamada Midoobay Guterres ayaa bilaabay digniintan ka dib markii uu booqday meelo badan oo laga dareemay inay ka dhalan karto masiibooyinka deegaanka, sida jasiiradaha Tuvalu ee Koonfurta Baasifiga, kuwaas oo lagu cabsi qabo khatarta biyaha ka dhalan karto.
Guterres ayaa ka digay in halista xaaladani ay ka dhigayso ama loogu baahan yahay bulshada aduunka in ay si degdeg ah wax uga qabato isbeddelka cimilada kuwaas oo dadka ku qasbay inay ka guuraan guryahooda iyo magaalooyinkooda.
Waxa uu yiri: “Waa inaan si degdeg ah u faragelinnaa si aan u badbaadino muwaadiniinta oo aan u badbaadino, gaar ahaan marka isbedelka cimiladu uu yahay masuuliyad saaray inay wax ka qabato Qaraamada Midoobay.
Guterres wuxuu tilmaamay in mudnaanta muhiimka ah ay tahay in la nadiifiyo hawada, si ay wasakhowga uga faafin dalagyo badan oo aan kiimikada ahayn, yareeyo khasaaraha kala duwan ee noolaha, iyo bedlida habka aan ganacsiga u sameyno sida loo abuuro tamar, dhisida magaalooyin iyo quudinta adduunka.
“Waan ogahay in aan sameyn karno oo dhan haddii ay jirto rabitaan siyaasadeed.” Isagoo xusay in uu ku baaqay sababtan awgeed in uu shir isugu yimaado si aaggan bisha September sanadka soo socda ee New York.
Guterres ayaa weydiiyay hoggaamiyeyaasha caalamka inay sameeyaan qorshayaal wax ku ool ah oo lagu dhiirrigelinayo tallaabooyinka cimilada.
Waxa uu tilmaamay in uu farageliyay ujeeddadaas iyada oo la tashaday tiro madax ah oo dawladeed ah si ay u qabtaan dadaal heer sare ah si ay u abaabulaan taageerada dhaqaale ee shirarka cimilada ee soo socda si loo kordhiyo $ 100 bilyan oo laga helo ilaha guud iyo kuwa gaarka ah ee dalalka horumaray si loo badbaadiyo dalalka soo koraya iyo dib-u-dhiska Sanduuqa Cagaaran ee Cimilada.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale ugu baaqay maalgashadayaasha in ay joojiyaan maalgashiga mashaariicda qashinka ah ee cimilada iyo maalgashiga halkii ay ku yeelan lahaayeen mashruuc ilaalin geesinimo leh oo hami leh.
Waxa uu tilmaamay in ujeedada ugu dambeysa ay tahay in la abuuro dhaqaale nadiif ah oo ka madax bannaan qashinka iyo wasakheynta ilaa hadda ilaa qarniyada soo socoda wadamada aduunka si ay uga wada shaqeeyaan sidii loo yareeyn lahaa kor u kaca kuleylka aan ka badnayn heerka Darajada 1.5 sida waafaqsan Heshiiska Shirweynihii Paris ee Cimilada.
Dowoodda Australiya ee Vienna waxay martigelin doontaa shir labo maalmood ah oo cimilada caalamiga ah kaas oo diiradda saari doona mashaariicda ilaalinta cimilada ee la fuliyay oo sahmin doona siyaabaha cusub ee maalgelinta sida ku cad Charter Charter Charter ayuu yiri Antonio Guterres .
Wuxuuna intaa raaciyay in Shirka looga wada hadli doono arrimaha kor u qaadida maalgashiga kaabayaasha deegaanka si loo abuuro dhaqaale cagaaran, iyaabo lagu caawiyo himilooyinka horumarinta ee Qaramada Midoobay ee Vision 2030, iyo sidoo kale aragti la wadaago ee bulshooyinka isku dhafan iyo ka yar.
Shirku wuxuu isku dayi doonaa inuu isku xiro oo uu xoojiyo wadooyinka isgaarsiinta ee u dhaxeeya wadamada G20 , deeq bixiyeyaasha teknoolajiyada iyo maalgashadayaasha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Previous articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda oo Shir Madaxeedka dalalka Ururka Iskaashiga Islaamka kaga qeyb galaya magaalada Makka
Next articleTaliyaha Ciidanka Badda oo ka warbixiyay dib u habeynta balaaran ee lagu sameeyay Ciidamada Badda